TOBBANKA Daafac Ee Ugu Goolasha Badan Yurub Oo Lasoo Xulay & Saddexda Xiddig Ee Booska 1-aad Wada Galay Oo Lama Filaan Ah - Gool24.Net
TOBBANKA Daafac Ee Ugu Goolasha Badan Yurub Oo Lasoo Xulay & Saddexda Xiddig Ee Booska 1-aad Wada Galay Oo Lama Filaan Ah
Shabakadda caanka ku ah xog ururinaha kala duwan ee kubadda cagta ee Transfermarkt ayaa markan soo xushay tobbaanka daafac ee xilli ciyaareedkan 2019-20 ugu goolasha badan shanta horyaal ee ugu waaweyn qaarada Yurub.
Liiskan ayay kusoo baxeen xiddigo badan oo magac weyn leh waxaana kamid ah kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos iyo isku xidhaha daafaca Liverpool ee Virgil Van Dijk.
Arrinta xiisaha badan ayaa ah in dhammaan saddexda xiddig ee ugu goolasha badan liiskani ay yihiin daafacyo bidix taas oo muujinaysa sida ay xiddigaha daafaca bidix weerarka ugaga wanaagsan yihiin dhigooda kale ee daafaca.
Marka laga yimaado inay haystaan kaalmaha ugu sarreeya ee dhinaca gool dhalinta, sidoo kale xiddigaha daafaca bidix ayaa ah kuwa guud ahaan ugu badan liiskan.
Saddexda ciyaaryahan ee ugu sarreeya oo min 7 gool leh ayaa kala ah daafaca bidix ee kooxda ree Talyaani ee Atlanta ee Gosens, daafaca bidix ee kooxda ree Germany ee Augusburg ee Max iyo daafaca bidix ee Criscito oo ka tirsan kooxda kale ee Talyaaniga ah ee Genoa.
Theo Hernandez oo AC Milan wacdarro ku dhigaya ayaa shan gool leh waxaana ay isku mid yihiin Sergio Ramos halka Virgil Van Dijk ay min afar gool wadaagaan Marcos Alonso oo Chelsea ka tirsan.
Liiskan Oo Dhammaystiran
Gosens = 7
Criscito = 7
Hinteregger = 6
Kolarov = 6
Theo Hernandez = 5
Ramos = 5
Bornauw = 5
Van Dijk = 4
Alonso = 4